बोल्दा बोल्दै बोली फुटेर रुन खोज्ने श्यामको दुःख साँच्चै नै भयानक:सबैको माया र साथ पाउनु पर्नेमा सबैले एकैचोटी साथ छाडी दिंदाको पिडा कस्तो हुन्छ होला ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/बोल्दा बोल्दै बोली फुटेर रुन खोज्ने श्यामको दुःख साँच्चै नै भयानक:सबैको माया र साथ पाउनु पर्नेमा सबैले एकैचोटी साथ छाडी दिंदाको पिडा कस्तो हुन्छ होला ?
बोल्दा बोल्दै बोली फुटेर रुन खोज्ने श्यामको दुःख साँच्चै नै भयानक:सबैको माया र साथ पाउनु पर्नेमा सबैले एकैचोटी साथ छाडी दिंदाको पिडा कस्तो हुन्छ होला ?
केहीबेर अघि रमाउँदै विवाह गरेका यो जोडीलाई घर जाँदै गर्दा बिच वाटोमै के भयो यस्तो ? (भिडियो हेर्नुस्)
नायक किशोर खतिवडा भन्छन्, पहिलो भेटमै लक्ष्मीसंग शा’रीरिक स’म्पर्क भयो (भिडियो)